पशुपति शर्मालाई अमेरिका यहीँ.... नेपालमै कमाउँछन् महिनामा ९ लाख
यतिबेला मौसम बडो गज्जबको छ । यही मौसम पारेर थुप्रै महोत्सव पनि आयोजना गरिन्छन् । कलाकर्मीका लागि यो मौसम महोत्सवको मौसम पनि हो । प्रायः सबै कलाकार यो मौसममा महोत्सवमा गीत गाउँदैमा व्यस्त हुन्छन् । लोक गायकको पैसा आय गर्ने स्रोत नै यस्तै महोत्सव भएका छन् । त्यही व्यस्त समय र मौसममा अभिनेता पशुपति शर्मा पनि व्यस्त बनेका छन् यतिबेला । कुनै न कुनै ठाउँमा हुने महोत्सवका कारणले उनको व्यस्तता एकदमै बढेको छ । महिनामा २४÷२५ दिन महोत्सवमा पुगेर गीत गाइरहेको उनी बताउँछन् । ‘यतिबेला त मेला महोत्सव मै व्यस्त छु, वर्षमा यो समय अलि बढी नै महोत्सवको निम्ता आउने गर्छ, व्यस्त भइन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सधै यस्तै हुन्छ भन्ने कहाँ हुन्छ र? कहिलेकाहीं पैसा नै नकमाइकन पनि बस्नुपर्ने हुन्छ ।’
एक गीतमा पशुपति शर्माले कोमल वलीलाई राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिएका थिए । ठ्याक्कै गीतले भनेझैं कोमल वली राजनीतिमा बढी सक्रिय भएकी थिइन् ।
यतिबेला भने पशुपति शर्माले राम्रै पैसा कमाएका छन् । केही वर्षदेखि निरन्तर चर्चित भइरहेका शर्माका हास्य व्यङ्ग्यले भरिएका गीत प्रायः चर्चामा हुन्छन् । ठट्यौली पारामा गाएका गीत हिट हुन्छन् । गीतमार्फत उनले सामाजिक विषयवस्तु र राजनैतिक व्यङ्ग्यलाई पनि कतै न कतै छोएका हुन्छन् । यो उनको विशेषता पनि हो । एउटा रमाइलो कुरा त के छ भने उनले व्यङ्ग्यात्मक रुपमा गायिका कोमल वली (अहिले नेकपा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकी छिन्) लाई कटाक्ष गर्दै गीत गाएका थिए । उक्त गीतमा पशुपति शर्मा आफैले शब्द र संगीत भरेका थिए । तीजको भाकामा गीत तयार पारिएको थियो । गीतको भिडियोमा शुरुमा पशुपति शर्माले कोमल वलीलाई सल्लाहकार राख्न भनेका छन् । गीतले अब राजनीतिमा लागेपछि पोइ नचाहिएको कुरालाई समेटेर उनले गीत गाएकी थिइन् ।एक गीतमा पशुपति शर्माले कोमल वलीलाई राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिएका थिए । ठ्याक्कै गीतले भनेझैं कोमल वली राजनीतिमा बढी सक्रिय भएकी थिइन् । कोमल वलीले राजनीतिमा लागिन् । संसद भवन छिरिन् पनि । अब भिडियोमा भनेझैं के कोमल वलीले पशुपति शर्मालाई ‘सल्लाहकार’ राख्लिन् त? भनेर हामीले पशुपति शर्मालाई सोधेका थियौं ।‘यो संयोग हो र हामीले यसलाई संयोगकै रुपमा हेरेका छौं, कोमल दिदीको रुचि र सम्भावना देखेर मैले राजनीतिमा लाग्नुस् भन्ने भावनाको गीत गाएको थिएँ, पछि उहाँ राजनीतिमा उस्तै सक्रिय हुनुभयो’, शर्मा भन्छन्, ‘तर सल्लाहकार राख्ने भन्ने कुरा हामीले भिडियो रेकर्ड गर्दा सोचेर बोलेका हौं, मलाई उहाँले सल्लाहकार राख्नुहुन्न र म त्यसका लागि योग्य पनि छैन ।’ ‘दिदीले राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य छोड्दा उहाँको राजनीति धरापमा पर्छ कि भन्ने लागेको थियो, तर अहिले राम्रै भयो ।’, शर्मा भन्छन् । कोमल वलीले आफूलाई सबैसँग गीत गाएँ, तिम्रो लय शब्दमा गीत गाउन मन छ भनेको भएर आफूले गीत जुराइदिएको बताउँछन् शर्मा । ‘पोइ चाहिएन गीत चाहिँ दिदीको मनशाय बुझेर लेखेको थिएँ, तर गीत अनुसार संयोग नै कस्तो प–यो भने जस्ता गीत गाउँदै गयौैं, त्यस्तै हुँदै पनि गयो’, गीतमा भनेझैं सल्लाहकार बन्ने विषयमा शर्मा अझै थप्छन्, ‘सल्लाहकार बन्ने महत्वाकाक्षीं नबनौं, मसँग खुबी पनि छैन, बरु दिदी भाइको कुरा भइरहन्छ, एक प्रकारले त म सल्लाहकार पनि हुँ नि ।’ यतिबेला शर्मा उनी महोत्सवकै लागि बुटवल पुगेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै महोत्सवमा जानुपर्दा उनले कुनै नयाँ गीत रेकर्ड गर्न समेत नभ्याएको बताउँछन् । अहिले उनको कमाइ पनि राम्रै छ । कमाइले फुर्सद कम दिएको छ । ‘हुन त यो कमाइ दिगो कमाइ होइन, तर मैले एक महिनामा आठदेखि नौ लाखसम्म खर्च कटाएर बचाएको छु, आफूसक्दो ट्याक्स पनि तिरेको छु’, शर्मा थप्छन्, ‘अहिले त महोत्सवको पारिश्रमिक दिने बेलामै धेरैले ट्याक्स कटाएरै दिने गर्नुहुन्छ ।’ कुनै महिना राम्रो कमाइ हुने गरेपनि कुनै महिना भने खासै कमाइ गर्न नसकेको शर्मा बताउँछन् । बसोबास काठमाडौंमै छ तर उनी धेरै समय बाहिरी जिल्लामा नै हुनुपर्छ । ‘अझ पहिले त महोत्सवमा धेरै अफर आउने गथ्र्यो, सकभर धेरै ठाउँ पुग्न पाए हुन्थ्यो अहिले भने सकभर दिनमा एउटा कार्यक्रम मात्र भ्याउने गरेको छु’, उनी हाँस्दै भन्छन्, ‘तर भोलि (आइतबार) त दुईवटा कार्यक्रम नै छ ।’ अहिले व्यस्त भएपनि उनको कहिलेकाहीं समय यत्तिकै खाली बित्छ । कहिलेकाहीं खर्च कटाएर महिनामै टन्नै पैसा कमाए पनि कहिलेकाहीं भने कमाई नहुने उनी बताउँछन् । तर यतिबेला भने उनलाई गीत रेकर्ड गर्ने फुर्सद पनि छैन । ‘केही दिनमै हामीले एउटा नयाँ गीत रेकर्ड गर्न लागेका छौं, सम्भवतः यही २९ गते रेकर्ड हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो गीत पनि केही व्यङ्ग्यात्मक छ र दर्शकले रुचाउनु हुनेछ भन्ने आशा छ ।’ यतिबेला महोत्सवमै बढी व्यस्त रहने शर्मा तिजको बेलामा अझ बढी चर्चामा रहने गर्छन् । यस पटक पनि उनले कोमल वलीसँगै तीजको गीत गाउने तयारीमा छन् । यसपटक तीजका लागि तयार गरेको गीत अझ विशेष भएको उनी बताउँछन् । ‘हेर्दाहेर्दै कोमल दिदी पनि राजनीतिमा लागेर माननीय हुनुभो, हाम्रो कुरा भइरहेको हुन्छ’, उनी थप्छन्, ‘यस पटक तीजमा पनि दिदीले सँगै गाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, यो गीत विशेष बन्नेवाला छ ।’
यतिबेला दोहोरी गाएरै राम्रै पैसा कमाएका शर्मा ठेट दोहोरी गाउनमा पनि उत्तिकै चोटिला मानिन्छन् । उनले गाएको ‘मलाई अमेरिका यही’ बोलको गीत सर्वाधिक चर्चामा छ । गीतका शब्दमा नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश छ ।
यतिबेला दोहोरी गाएरै राम्रै पैसा कमाएका शर्मा ठेट दोहोरी गाउनमा पनि उत्तिकै चोटिला मानिन्छन् । उनले गाएको ‘मलाई अमेरिका यही’ बोलको गीत सर्वाधिक चर्चामा छ । गीतका शब्दमा नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश छ ।शर्मा आफू भोलि गीत गाएर बाँँच्न सक्ने अवस्था आएन भने गाउँ फर्किएर बाख्रा पाल्ने बताउँछन् । ‘गीत गाएर सधै कमाइ हुन्छ भन्ने छैन, भएन भने भोलि गाउँ गएर बाख्रा पाल्छु ।’, उनी हाँस्छन् । https://www.facebook.com/lokpath/
विर्तामोडका सुनचाँदी व्यवसायी छ दिनदेखि बेपत्ता
पुस ४, २०७५ | बुधबार
नागरिक आफैँले फारम भर्न पाउने
मेक्सिकोका राष्ट्रपतिद्वारा एक तिहाई तलब फिर्ता
चोरी र लुटपाटमा संलग्न ४ महिलासहित ७७ जना पक्राउ
महानगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटको कामको अनुगमन नगरवासीले गर्नुपर्छ : रेणु दाहाल
काँग्रेसमा अर्जुननरसिंह केसीको विजय : अब यस्तो बन्ने भयो पदाधिकारी
पुस ३, २०७५ | मंगलबार
नेपाली पात्रोले ल्यायो नेपालीमै टाइप गर्न मिल्ने नेपाली किबोर्ड
कांग्रेस महासमिति बैठकमा भाँडभैलो: नुवाकोट जिल्ला सभापति केसीले खुलाए झगडाको कारण
निर्मला प्रकरणः ८ प्रहरी अधिकारी तथ तनावमा, मुद्दा पर्यो
काङ्ग्रेस बैठकमा तनाव: जगदीश केसी र प्रकाशशरण महतबीच भनाभन, बैठक अवरुद्ध
कांग्रेस महासमिति बैठकमा तनाव, केसीले बोल्दा सहमहामन्त्रीले माइक खोसे